I-Luxury Croft ejongene neLoch Ness & Urquhart Bay - I-Airbnb
I-Luxury Croft ejongene neLoch Ness & Urquhart Bay
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnnie & Simon
UAnnie & Simon yi-Superhost
I-Urquhart Bay Croft yindawo entsha yokuzihlaziya eyakhiwe ngobunewunewu neendawo ezintle kuyo yonke i-Loch Ness ne-Glen Urquhart.
Ngaphantsi inepaseji yokungena enobude obuphindwe kabini, igumbi lokulala elinye elikhulu, kunye negumbi lokuhlambela losapho elahlukileyo, ngoxa kumgangatho ongasentla inendawo evulekileyo yokuceba ikhitshi/indawo yokutyela, indawo yokuphumla enesofa etofotofo kunye nendawo yokufaka impahla yasimahla, kunye neminyango evulekileyo kwindawo enamaplanga kunye negadi evulekileyo yakuMzantsi.
SinguAnnie Greenlay noAnnie Greenlay. Siqale sabona indlu esemaphandleni i-Urquhart Bay ngo-2014 saza sayithanda. Siye saqhuba i-Urquhart Bay BnB nge-2yrs(jonga ezinye izindlu zethu ukuze ufumane izimvo). Besazi kwangoko ukuba sifuna ukuhlala kule ndawo ipholileyo ibe siyibona kakuhle iLoch Ness.
ICroft yiprojekthi yethu yakutshanje esiyenze ngentliziyo nomphefumlo wethu, kwaye sikhangele phambili ukuyibonisa iindwendwe zethu.
ICroft ime kufutshane nedolophana entle yaseHighland eDrumnadrochit, kwaye kuthatha nje imizuzu eyi-2 ukusuka kwiUrquhart Castle edumileyo. Ihlala kwiigadi eziphangaleleyo zabucala ukuze ibuke iindawo ezintle zaseLoch Ness naseGlen Urquhart.
Ngaphantsi komgangatho, kukho igumbi lokulala elikhulu elinefestile yokuqala ebonisa kakuhle xa usuka ebhedini ngaphaya kweloch, negumbi lokuhlambela elisecaleni elinendawo yokuhlamba esongwayo neshawa eyohlukileyo enentloko yemvula. Ngaphantsi, kukho ikhitshi elikhulu elivulekileyo/i-diner kunye nendawo yokuphumla enendawo yokufaka impahla esima simahla, enesofa eyibhedi yabantwana. Sisebenze kunye neengcali zasekuhlaleni ukubuyisela nokuphucula isakhiwo sokuqala, ukuze ungaze ube kude neLoch (nokuba usebhedini yakho!), kwaye awukwazanga ukuba kufutshane neNqaba yaseUrquhart edumileyo, uhamba nje imizuzu embalwa.
Ngokuhlwa kwe-cosier sine-log burner enkulu, I-SMART TV kunye ne-WiFi ekhawulezayo efumaneka kuyo yonke indawo.
ICroft ifenitshala ekumgangatho ophezulu kakhulu, inezinto ezininzi ezenziwe ngezandla zaza zaxhonywe. Iindwendwe zinokulindela izinto zokuthambisa ezisemgangathweni, ilinen yomqhaphu yaseYiputa kuyo yonke indawo, kwaye siyakuvuyela ukubonelela ngamaqanda amatsha yonke imihla kwiintlanzi zethu eziphakamileyo.
ICroft yindawo entle yokubuka iinduli eziphakamileyo, kwaye zininzi iindlela zokuhamba ukusuka ngqo emnyango ukuze ubuke iindawo zasekuhlaleni ngaphaya kweLoch edumileyo, okanye ungene kwezinye zezilwanyana zasendle zasekuhlaleni ezinjengezimuncumuncu ezininzi zasekuhlaleni okanye iintaka ezihlala kufutshane neLoch.
Sineendawo ezininzi zokupaka kwaye sihamba ngeenyawo ukusuka kwidolophana yaseDrumnadrochit.
5.0 · Izimvo eziyi-139
Ipholile kwaye ikwindawo yobuhle obungathethekiyo. Uhambo olufutshane oluya kwilali kwindlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Annie & Simon
Sikwaqhuba ne-Urquhart Bay B&B kwa-Airbnb. Siza kukwazisa kumaziko aseUrquhart Bay Croft kwaye siyafumaneka yonke imihla ukuze sicebise kwaye sinxibelelane nawe njengoko kufuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Drumnadrochit